Ahoana ny fametrahana ny lohahevitry ny kisary Papirus amin'ny Ubuntu | ubunlog
Ahoana ny fametrahana lohahevitra icon Papirus amin'ny Ubuntu
Raha te hanova ny endriky ny biraonao amin'ny Ubuntu ianao, ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy tsotra hanaovana izany dia tsotra. mametraka lohahevitra kisary. Ny iray amin'ireo tsara indrindra dia ny Papirus. Izy io dia mampiditra andiana kisary vaovao tsara izay handrakotra saika ny fampiharana rehetra, manomboka amin'ny mpitety tranonkala Chrome sy Firefox, mankany amin'ny programa toa ny VLC na ny mpanjifa Steam, ary na dia ho an'ny rindrambaiko Microsoft Windows hafa aza raha mametraka izany amin'ny WINE ianao.
Ity lohahevitra ity dia tena manaitra, miaraka amin'ny endrika mitandrina, tsy misy zoro, miaraka amin'ny silhouettes boribory sy malefaka, loko marevaka, ary ny fikasihana semi-3D mba hanomezana zavatra "fanamaivanana" sy ny maoderina. Inona koa, dia mifanaraka amin'ny Ubuntu, ny derivatives, ary miaraka amin'ireo distros GNU/Linux hafa, afaka mametraka azy amin'ny fomba tena tsotra araka ny hazavainay ato amin'ity lesona manaraka ity.
Papirus dia lohahevitra kisary novolavolaina tamin'ny fampiasana ny tranomboky GTK+, noho izany dia mifanaraka amin'ny GNOME sy ny derivatives, toy ny Xfce, Cinnamon, sns. Na izany aza, raha manana KDE Plasma distro ianao, toa an'i Kubuntu, dia tokony ho fantatrao fa misy dikan-teny azo alaina ho an'ny tontolo Qt, na dia tsy havaozina matetika aza izany.
Fametrahana kisary Papirus ao amin'ny Ubuntu (sy ny derivatives)
Mba hahafahana mametraka ny lohahevitry ny kisary Papirus amin'ny distro Ubuntu dia mora toy ny ampio ny PPA ofisialy amin'ity tetikasa ity amin'ny lisitry ny loharano rindrambaiko. Ary izany dia tsotra toy ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Amin'izao fotoana izao dia ampiana ny loharano rindrambaiko hametrahana sy havaozina. Ny zavatra manaraka tokony hatao dia ny fametrahana ny fonosan'ny loha-hevitra Papirus icon avy amin'ny loharano rindrambaiko vao nampidirinao:
Efa manana ity fonosana kisary ity napetraka ho an'ny Ubuntu ianao, ary ho an'ny miova ho hoditra Papirus, mila manaraka dingana tsotra hafa ianao:
Sokafy ny fampiharana *Tweaks amin'ny distro anao.
Avy eo tsindrio ny fidirana amin'ny Appearance ao amin'ny sakafo ankavia.
Raha vao tafiditra, ao amin'ny fizarana Themes, tadiavo ny Icons.
Tsindrio ny dropdown ary mifidiana Papirus amin'io lisitra io.
Vita, afaka mivoaka ianao izao ary mahita ny vokany.
By ny lalana raha tsy manana ny app Retouch ianao, na Tweaks amin'ny teny anglisy, azonao atao ny mametraka izany amin'ny fomba tsotra:
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Retouching dia azonao atao jereo ity lahatsoratra ity avy amin'ny bilaoginay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fametrahana lohahevitra icon Papirus amin'ny Ubuntu
ET: Lova, apetraho amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Flatpak ity lalao ity
Extension Manager, tadiavo ary apetraho ny fanitarana GNOME Shell